के गर्न सक्दा रहेछौँ र हामीले ! | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
नयाँ गाडी चढ्ने रहरले नयाँ गाडी (विंगर) किनें । के थाहा थियो र यसरी झ्याप्पै ब्रेक लाग्छ केही महिनामै भनेर । झन्डै-झन्डै चार महिना हुन लाग्यो गाडीसँगै मेरो सपना घरमा थन्किएको ।
१८-२० वर्ष हुन लाग्यो गाडी लाइनमा रहेर भविष्य राम्रो बनाउने सपना सजाउन थालेको । अहिले विंगर किन्ने हैसियतसम्म आउन मैले सबै थोक गरें । आइचार चलाइन कि बोलेरो चलाइन । अनि लामो समयसम्म ट्याक्सी चलाएँ । एक वर्ष जति भयो ट्याक्सीबाट विंगरमा प्रमोसन गरेको । बैंकबाट किस्तामा तिर्ने सहमतिमा ऋण लिएर निकालेको हो यो गाडी मैले । पूरै पैसा तिरेर निकाल्ने त कहाँ आँट गर्न सक्नु र !
जिन्दगीको गाडी राम्रोसँगै कुदिरहेको थियो । काठमाडौं कलंकीबाट चितवन, पर्सा, नारायणगढ, टाँडी भण्डाराको टिप गर्थें । कहिलेकाहीं रिजर्भमा पनि जान्थें । बैंकको किस्ता तिर्न, घरखर्च चलाउन पुगिरहेकै थियो । मेरो चार जनाको परिवार छ । कमाउने म एक्लै हुँ । त्यही भएर पनि मेरो गाडी घरको आँगनमा थन्किनु भनेको म आफै थला पर्नु जस्तै हो । गाडी कुद्न नपाएकाले घामपानीले टायर मक्किने मात्र होइन, अब इन्जिनमा पनि खराबी आउने हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ ।
कोरोनाले भन्दा पनि यो लकडाउनले मलाई मात्र होइन सारा संसारलाई असर परेको छ । बच्चाहरुको पढाइ एक वर्ष त्यतिकै गइहाल्यो । आफ्नो कमाइको के कुरा गर्नु । त्यत्रो महिना घाटा भइसक्यो । मेरो जीवन पहिलेको जस्तो हुन मैले पाँच वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ । यस्तो सोच्दा पनि मन भारी भएर आउँछ । जीवन ५ वर्ष पछाडि धकेलियो ।
म सितिमिति निराश हुने मान्छे होइन । जीवनप्रति सधैं सकारात्मक हुन्थेँ, मिहिनेत गर्नुपर्छ सोचेको सबै पूरा हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यही भएर पनि होला आइचारबाट सुरु गरेको जिन्दगी अहिले आफ्नै विंगरसम्म आइपुगेको थियो । तर अब जीवनप्रति निराश भएँ म । मनमा चिन्ता धेरै छ। कमाइ खाने गाडी अहिले थन्किराखेको छ। मेरो गाडीले महिनाको त्यस्तै १५ देखी २० ट्रिप गर्थ्यो । म आफैले चलाउने हुँदा २० ट्रिप गर्दा लगभग एक लाखको हाराहारीमा कमाइ हुन्थ्यो । त्यहीबाट गाडीको किस्ता तिर्थेँ र घर चलाउथें । अहिले चुप लागेर बस्दा मनमा पीर त भई नै हाल्छ नि ।
पिरसँगै रिस पनि उठ्छ विभेदवाला नियमकानुन देखेर । कसैले चलाउन पाउने कसैले नपाउने । हामीलाई गाडी चलाउन नदिदाँ चाहिँ साह्रै खल्लो लागेको छ । अरूले चलाइरहेका छन्, प्राइभेट गाडी मान्छे बोकेर हिंडिरहेका छन् तर हामीले भने चलाउन पाउँदैन भनेकाले कोरोनासँग भन्दा पनि सरकार र प्रशासनसँग रिस उठेको छ । गाडी कसैले चलाउँदा कोरोना नसर्ने । हामीले चलाउँदा चाहिँ सर्ने । कस्तो भाइरस हो यो ? कस्तो सोचाइ हो ? मैले केही बुझ्न सकेको छैन ।
यही पाराले लकडाउन लम्बियो भने दुई छाक खान धौधौ हुन सक्छ । धन्न काठमाडौंमा सानो घर छ र । नत्र कोठा भाडा तिर्नुपरेको भए त मेरो बेहाल भइसक्थ्यो । धेरै ड्राइभर साथीहरुको पिरलो सुनेको छु मैले । बेहाल छ ।
लकडाउन भएपछि म परिवारसहित मेरो गाउँ नुवाकोट गएँ । गाउँ नगएको पनि धेरै भइसकेको थियो गाडीले गर्दा । केही दिन छुट्टी जस्तै भो । के थाहा थियो र महिनौंका लागि पो छुट्टी दिने तरखर गरेको रहेछ सरकारले भन्ने कुरा ।
गाउँमा खेती किसानी गरें । घरभित्रै मात्र बस्नु खेतबारीको काम पनि नगर्नु भन्थ्यो सरकारले तर पानी पनि छ रोग लागे लाग्छ भनेर खेत रोपाइँ गरियो । कति डराउनु, केकेसँग डराउनु । भन्नेलाई पो सजिलो छ, गरेर खानेलाई गाह्रो छ । गाडी थन्क्याउनु पर्दा परेको पीरले दिक्क भएको मनले खेती किसानी गर्दा थोरै भए पनि राहत पायो । रोपाइँ सकेर अस्ति भर्खर मात्र हो काठमाडौं फर्केको । त्यो पनि बल्लबल्ल आएँ । नआएर पनि के गर्नु । आफ्नो कमाइ खाने भाँडो यतै छ । सधैं गाउँ बसेर साद्दे पनि लाग्दैन । अहिलेसम्म त मेरो लगभग पचास हजार भइसक्यो बैंकलाई तिर्नुपर्ने । कहाँबाट तिर्ने दिमाग अनि खल्ती दुवै खाली छ । अहिलेसम्म त धन्न बैंकले केही भनेको छैन, आज पनि म बैंकमा पुगेर आएको ।
अब त स्थिति अति नाजुक हुन थालिसक्यो । सरकारले के गर्न खोजेको हो । हाम्रो सार्वजनिक गाडीचैं चल्न दिएको छैन । प्राइभेट गाडी जोर बिजोर गरेर चलाउन मज्जाले दिइरहेको छ । निजी गाडीले भाडा असुलेर मारामार कमाइराख्या छ । सार्वजनिक बस थन्किराखेको छ । यत्रो महिनामा सरकारले के निर्णय गर्‍यो हाम्रा लागि ? सरकारले सबैका बारेमा सोच्नुपर्ने होइन ? ल एकै पटक नखुलाओस् तर बिस्तारै कसरी खुलाउने, कस्तो सावधानी अपनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ नि । बरु विदेशमा जस्तो दुई जनाको सिटमा एक जना राखौँ ।
विदेशमा लकडाउनमा पनि सार्वजनिक गाडी बन्द भएनन् भन्ने सुनेको छु । खै हाम्रोमा त सबैभन्दा पहिले बन्द हुने नै सायद गाडी भयो । अहिले पनि अली शक्तिशालिले चलाउन पाइराखेकै छन् । हामी चाहिँ हेरेको हेरै । गाडी घरको आँगनमा थन्किराख्या छ । अब हाम्रो सरकारले रातो प्लेटलाई मात्र कतिन्जेल स्याहारी राख्दो रहेछ हेरौं । अहिलेसम्म त चाइँचुइँ केही सुनेको छैन । म त्यसै चुप लागेर बसेको छु । के गर्ने ? के नै गर्न सक्दो रहेछौँ र हामीले ?
जे हुँदा पनि सुख छैन